HDPE oghere mgbidi asọfe anwụrụ
Aluminum Alloy agbakọta Plasti ...
Pee mmiri ọkọnọ anwụrụ HDPE eriri igwe
Nnukwu mgbanaka mgbanaka: a na-eji mgbidi mgbanaka ahụ nwee mgbidi mgbidi, nke na-eme ka mgbanaka mgbanaka ahụ dịkwuo mma. N'ihe banyere otu ihe ahụ, ọ nwere ike iburu nrụgide gburugburu ebe obibi ka ukwuu.
Sistemụ drainage dị n'ime ya nwere uru pụtara na-atụnyere usoro ndọda nke ugbu a.
Large dayameta OD1800mm HDPE Pipe maka Water Tụkwasịnụ
Ihe HDPE anaghị egbu egbu ma na-atọ ụtọ. Ọ bụ nke ihe eji eme ụlọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ghara ịlele site na nlele ahụike siri ike, nke nwere ike melite ogo mmiri nke ọma.
Kemgbe eji ya na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ mmiri na 1970s, ọkpọkọ polyethylene (HDPE) dị elu aghọwo ezigbo ihe maka sistemụ piping eji ebufe mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Dị ka ihe siri ike ma sie ike nke nwere ike ịdịru afọ 100 ma ọ bụ karịa na obere ndozi, HDPE pipe egosiwo na ọ karịrị ọtụtụ ihe ndị ọzọ anwụrụ wee nwee ike iji dị ka ụzọ nkesa na nkesa mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Ndụ ogologo ndụ na ụgwọ mmezi dị ala nke ọkpọkọ HDPE, tinyere ikike ya na teknụzụ dị iche iche nwere obere grooves, na-eduga na ntinye nke HDPE ọkpọkọ nwere ọnụ ahịa ndụ kachasị dị ala nke sistemụ ọkpọkọ mmiri ọ bụla.
Large dayameta OD1600mm HDPE Water Tụkwasịnụ Pipe maka Municipal Ngwa
ọ HDPE ihe bụ ndị na-abụghị na-egbu egbu na keenweghiuto. Ọ bụ nke ihe eji eme ụlọ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ghara ịlele site na nlele ahụike siri ike, nke nwere ike melite ogo mmiri nke ọma.
Pee anwụrụ ọtụtụ-eji na ubi nke nsị, mmiri, drainage na mmiri njem àgwà ka ya elu ike, elu okpomọkụ na-eguzogide, corrosion eguzogide, na-abụghị na-egbu egbu na-eyi na-eguzogide.
Aha aha: aluminum alloy lining plastic pipe, plastic lining aluminum alloy anwụrụ
Executive ụkpụrụ: CJ / T 321-2010
Nkọwapụta ngwaahịa: Dn 20-dn 160
Product ọkwa: Ọkwa 1
Ngwaahịa were: mmiri, kpo oku
Ọgwụgwọ: anodic oxidation
Usoro iwu: 1.5 n'arọ / m
Akwụkwọ maka ekpepụsị ogologo nke alloy alloy mpụga tube:
Mgbapụta nke elu ọnụ (mm) 20/25/32/40/50/63/75/90/110/160
Bee ogologo (mm) 13/15/17/19/20/25/28/32/38/55
Large-dayameta HDPE plastic ígwè asọfe anwụrụ
Nkọwapụta ngwaahịa: dn1000mm
Product agba: oji
Ngwaahịa ngwaahịa: HDPE polyethylene
Pipe ogologo: n'ozuzu 9m, na-akwado nhazi
Ngwaahịa were: nsị anwụrụ
Ogologo ndụ. Ezubere ọrụ ndụ afọ 50 n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ na nrụgide akara.
DN200hdpe gas anwụrụ
Nkọwapụta ngwaahịa: DN200
Nhazi ọkwa: pe80 / 100 ọkwa
Elu ọnụ mgbali: 0.2 / 0.4 / 0.6 / 1.0MPa
Mgbidi mgbidi: 11.4 / 18.2mm
Agba akara akara: PE80-odoPE100-oroma
Ebe Mmalite: Xuzhou, Jiangsu
Emeputa: Jiangsu Runshuo Pipe Mmeputa Co., Ltd.
Mgbe ọ bụla na ala ma ọ bụ mmiri, HDPE dredging Pipe ngụkọta injinịa na-eri bụ obere na oru oma karịa ndị ọzọ ọkpọkọ.
Ezigbo nguzogide corrosion. The Pipe nwere magburu onwe acid na alkali eguzogide, corrosion eguzogide, adabara chemical ụlọ ọrụ.